Uwe mgbede maka ụmụ nwanyị zuru oke 2014
Uwe mgbede kwesịrị ịbụ uwe akwa nwanyị ọ bụla. Ekike a, bụ nke a na-aghaghị iji mesie ịdị ebube nke ọnụ ọgụgụ ahụ ike, nye ọmarịcha ihe omimi na ihe omimi nye onyinyo nwanyi. N'ezie, ọ bụrụ na i nwere ezigbo ọnụ ọgụgụ, ogologo ụkwụ ụkwụ dị ogologo, mgbe ahụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla ga - eme ka ọ dịkwuo mma ma chọọ mma gị. Ma gịnị maka ọdịdị uwe ejiji nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị zuru oke?
Ọ bụrụ na ị nwere "ihe ọkụkụ" na otu "ihe na-atọ ụtọ," na ịchọrọ ile anya dị ka mma dị ka o kwere mee n'uwe mgbede, isiokwu a bụ maka gị.
N'ikwu okwu banyere uwe mgbede mara mma nke zuru ezu, ọ bara uru ịkọwa ụdị nke ọ bụla iche:
Uwe mgbede na n'ala. Nke mbụ, nke a bụ ụdị maka ndị dumplings bụ ndị n'ihi ihe ụfọdụ ma ọ bụ ọchịchọ ọzọ ịzochi ụkwụ ha. N'afọ 2014, ejiji mgbede na ala nwere nkịkpu a gbajiri agbaji, ya na ejiji mara mma dị mkpa maka ụmụ agbọghọ tozuru etozu. Ọ bụrụ na ịchọrọ n'ụdị ndị ọzọ ejidere, ihe nlereanya na-egosi na ọkpụkpọ ahụ, ọnyá na-abaghị uru na n'akụkụ, nke na-ahụ anya ma dị warara n'úkwù, ga-adị mma.
Uwe na eriri. Nchikota nke eriri eriri na akwa akwa akwa anya belata oke n'ubu na n'olu.
Uwe ejiji. Uwe mgbede a bụ nọmba maka ụmụ nwanyị zuru oke n'afọ 2014. Ntak-a? N'ihi na site n'enyemaka nke ụdị ụdị ahụ, ngbanwe nke ọnụ ọgụgụ zuru ezu dịgasị iche iche ma dị irè. N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe nlereanya ahụ na-elegide anya na afọ, na ndị ọzọ ọ na-enwe ike ibuli ma nye olu nke ara, na nke atọ - imechi nkpa. Banyere agba agba, ị ga-anwa izere ọnyá na-ederede na nnukwu nnukwu mpempe akwụkwọ , yana nke na-acha ọcha ma na-egbuke egbuke, nke jupụtara na ya. Egwu a na-ahụ anya, ọchịchịrị ọzọ na akụkụ na akara ọkụ n'etiti - agba agba nke uwe ejiji maka ụmụ nwanyị zuru oke.
Ụdị na ebili mmiri na drapery. Karịsịa dị ka ụdị uwe mgbede ogologo oge zuru oke. Ugbo na ebe a na-ezochi mpịakọta ndị ọzọ, mepụta mgbakwunye ndị ọzọ ma nyefe ihe n 'ogige ahụ, ma zoo ebe nsogbu nke hips na n'akụkụ.
Ụdị na V na olu na isi ísì. Uwe mgbede nke ụdị ejiji a na-ekpuchi afọ na ụbụrụ zuru oke nke ụmụ nwanyị zuru oke, na-ebulitekwa ya. V-olu na-eme ka ọkpụkpụ na-ahụ ihu, na isi ísì dị mma maka ụmụ nwanyị nwere ọkwá. A na-ezo aka zuru aka na uwe aka na "mgbịrịgba".
Ọnụ ọgụgụ ụmụ nwaanyị ruru afọ 2013
Ncha nke ntutu
Ihe na-eme ihe
Victoria Beckham - Uwe
Ụdị ejiji oge okpomọkụ 2013
Uwe ejiji oge ezumike nke nwanyi 2013
Akpụkpọ ụkwụ - Mgbụsị akwụkwọ 2016
Armani - oge mgbụsị akwụkwọ 2016-2017
Lush skirts 2015
Ejiji ejiji chiffon 2014
Ndụ onwe onye Jennifer Aniston
Brown na mbubata na nwa ime
Gem si cowberries
Glomerulonephritis - mgbaàmà na ọgwụgwọ ụdị ọrịa niile
Nkuku ụlọ maka ime ụlọ
Tubules na ude bụ ntụziaka kacha mma nke nwatakịrị maara nke ọma
Anne Hathaway "na-egwuri egwu" ọrụ nke onye nwe obi ụtọ nke statuette "Oscar"
Foto nke nwanyị dị na Chicago afọ 30
Ime ime na njedebe okwu
Akwukwo ugbo na mmanụ aṅụ na oven
Ngwọrọgwu ụmụ nwoke maka ụkwara eto
Ebe obibi ndị mọnk nke Praskvitsa
Ịzụ ahịa na Madrid
Kuki oatmeal na cheese cheese
Ọgwụ egwuregwu maka ụmụaka
Kedu ka esi eji kilogram 20 ebufu ibu?
Ọkpụkpụ abdominal na nwa ahụ
Akpu Baby Bathing
Onye ọbịbịa ahụ ji ụjọ kpaa Kim Kardashian egwu mgbe ememe nke Ejiji Los Angeles Awards
Mgbaaka nke ụrọ polymer